Dhismaha & Beeraha - AOOD Technology Limited
Silsiladaha siibitaanka ee loo isticmaalo qalabka dhismaha & beeraha waa inay lahaadaan qaab dhismeed adag iyo waxqabad la isku halleyn karo sababtoo ah mashiinadan culus ayaa sida caadiga ah ku shaqeeya deegaanno adag oo bannaanka ah. Slip ring oo ah qayb muhiim ah oo ka mid ah nidaamyadan murugsan ee u baahan in lagu wareejiyo dhammaan awoodda, signalada, xogta laga helo qaab dhismeed taagan oo loo wareejiyo qaab wareegsan, waa inay ka gudubtaa deegaanno kala duwan oo dalbanaya oo si fiican uga shaqeeya nooc kasta oo bay'ad ah, sidoo kale waxay u baahan tahay inay u qalanto waajibaad dheer wareegyada shaqeeya.
AOOD waxay u heellan tahay xallinta awoodda, signalada iyo gudbinta xogta ee deegaannada dalbanaya. Injineero casri ah iyo teknolojiyadda wax -soo -saarka ee gaarka ah ayaa AOOD awood u siinaya inay siiyaan nidaamyada giraanta siibista ee qalabkan culus. Tusaale ahaan:
Rings Silsilado kaabsal ka -biyo -mareen ah oo loogu talogalay duub -duubka
Dim Cabbir ballaadhan oo ka samaysan siddooyinkii silsiladda dhaadheer ee isku -darka shamiitada
Rings Lalabyada lidka-lidka iyo shoog-ka-hortagga shoogga ee qalabka macdanta
Rings Silsilado sibidhka ah oo loo habeeyay wiishashka, qalabka qaadista, mishiinnada dekedda, qodista
Laga soo bilaabo naqshadeynta ilaa imtixaanka kama dambaysta ah, AOOD wuxuu si dhow ula shaqeeyaa macaamiisha, si buuxda u fahma shaqada uu giraanta silsiladdu fahmi doonto iyo jawiga shaqada, fiiro gaar ah u yeelo faahfaahinta kasta, hubso in giraanta silsiladda tusaalaha ah ay tahay waxa macmiilku doonayo.
Alaabooyinka la xiriira: Iyada oo loo marayo Sore Slip Sings, Siddo simbiriirixan oo caadadii ah